SHWE MANN:History will repeat itself if Suu Kyi is treated as enemy | democracy for burma
SHWE MANN:History will repeat itself if Suu Kyi is treated as enemy
tags: Burma, Daw Aung San Suu Kyi, Lower House speaker, Myanmar, NLD, Thura Shwe Mann, Unity
CREDIT EMG 19.JULY 2013
Myanmar’s Lower House speaker said that he had no quarrel with Aung San Suu Kyi, leader of the opposition National League for Democracy (NLD), and that treating her as an enemy would only cause history to repeat itself.
“National unity broke up at that time because of disunity between parties. We should take lesson from that. Aung San Suu Kyi is leader of the opposition as well as leader of the public in part. If we treat her as an enemy, our country’s history will repeat itself,” said the speaker.
SHWE MANN AND DASSK
MP’s Aung San Suu Kyi and Thein Swe were also present at the meeting.
“You (reporters) ask simply. Don’t do anything that can lead to quarrel and argument between us. We will never quarrel each other,” Shwe Mann said.
”သတင်းသမားတွေမေးရင် ရိုးရိုးပဲမေးပါ။ ရန်မတိုက်ပေးပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ ရန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ သမီးလည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် စိတ်ရင်းစေတနာနှင့် အရည်အချင်းများ ပြည့်နေကြောင်း၊ ထို့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊ အထက်ကလူများ ယင်းကဲ့သို့ အချင်းချင်း ညီညွတ်နေသည် ဆိုပါက အောက်ခြေ၌ရှိသည့် ပါတီဝင်များလည်း…
”အရင်တုန်းက အင်မတန်မှ အင်အားကြီးပြီး စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့တာ ဖဆပလ ပါတီပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ပထစ ပေါ်လာတယ်။ နောက် ပမညတ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပါတီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ မိတ်ဖက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လို သဘောမထားဘဲ ရန်သူလို သဘောထားပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီကစပြီး အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ NLD ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သလို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော ပြည်သူလူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ရန်သူလို ဆက်ဆံနေမယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့သမိုင်းကို ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်” ဟု သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားသည်။
← ရခိုင်တို့၏ သေရေးရှင်ရေး အဆုံးအဖြတ်ကာလ ( Critical period )
DASSK SPEECH MARTYR DAY NLD AND PEOPLE __အမေစု ၏ အာဇာနည်နေ့ ရုံးအတွင်းမိန့်ခွန်း..VIDEOS →